people Nepal » आजको राशिफल : बि.सं. २०७५ साल असार २७ गते बुधबार आजको राशिफल : बि.सं. २०७५ साल असार २७ गते बुधबार – people Nepal
आजको राशिफल : बि.सं. २०७५ साल असार २७ गते बुधबार
आज श्री शाके १९४० बि.स. २०७५ साल आषाढ २७ गते बुधबार इश्वी सन् २०१८ जुलाई ११ तारीख आषाढ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथी मृगशिरा नक्षत्र बृद्धि योग बणिज करण चन्द्रमा बृष राशिमा १२:५१ बजे सम्म पश्चात मिथुन राशिमा सुर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु (दिलाचःहे्र पुजा) विश्व जनसंख्या दिवस –
कार्यसम्पादनमा सामान्य ढिलाईको योेग रहेकोछ । बाणीका कारण अधुरा कार्य सम्पादन गर्न सहयोग पुग्नेछ । सामान्य आर्थिक तनाबको सामना गर्नुपर्ला । मित्रजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । नयाँ कार्यको थालनिले मन प्रशन्न रहला । आफन्तजनहरुको साथ सहयोगमा जटिल कार्यहरु सम्पादित रहनेछन । बिद्यार्थी बर्गका निम्ती समय मध्यम रहनेछ ।
स्वास्थका कारण कार्यक्षेत्रमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । आफन्तजनहरु बाटँ टाढा भएको अनुभव हुनेछ । नयाँ लगानिमा बिशेष ध्यान पूर्याउनु होला । मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा आम्दानि मध्यम रहला ।
बिशिष्ट ब्यत्तिहरुको साथ सहयोगमा नयाँकार्य थालनिका अवसरहरु प्राप्त रहनेछन । पूराना लगानि उठाउन उचित समय रहेकोछ । सामान्य वादबिवादको झमेलामा फसिएला । सामान्य यात्राको सम्भाबना रहेकोछ ।
कार्यक्षेत्रमा लगाईएको तत्परताको बिशेष कदर हुन सक्नेछ । सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा जुट्ने समय रहेकोछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा मधुरता छाउनेछ ।
कार्य सम्पादनमा गोपनियताको आवश्यकता रहनेछ । तपाई द्वारा सम्पादित कार्यको श्रेय गैर ब्यत्तित्व हरुले प्राप्त गर्नेछन । मित्रजनहरु सगको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । यात्राकारक दिन रहनेछ ।
गरीरहेको कार्यमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । नजिकका ब्यत्तिहरुबाट धोकाहुन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । नयाँकार्यको थालनि नगर्नुहोला ।
मनोबिलासिताका साधनको खरिद तथा प्रयोगमा सामान्य खर्चहुन सक्नेछ । ब्यापार ब्यवसायलाई दरीलो तुल्याउन सामान्य यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । पारीवारिक झोर झमेलाले सताउन सक्ने समय रहेकोछ ।
स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्नहुन सक्नेछ । प्रतिश्पर्दाजन्य कार्यमा तपाईको अब्बल स्थान प्राप्त रहनेछ । शुभचिन्तकहरुको साथसहयोगमा ब्यापार ब्यवसायमा मनग्य लाभ प्राप्त रहनेछ । नयाँ लगानि नगर्नु होला ।
नयाँ कार्यका अवसरहरु मनग्य प्राप्त रहनेछन । बिशिष्ट ब्यत्तिहरुको अनुशरणले सामान्य झन्झटका बिचमापनि कार्य सम्पादित रहनेछन । रचनात्मक कार्यमा समय ब्यतित रहला । अध्यन अध्यापनमा समय उत्तम रहनेछ ।
भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा सजग रहनुहोला । पारीवारिक झोरझमेलाले सताउन सक्नेछ । ब्यापार ब्यवसायमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । गरीरहेको कार्यमा समेत समस्या उत्पन्नहुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनेछ ।
प्रतिश्पर्दा जन्य कार्यमा समय उत्तम रहेकोछ । आत्मबलमा बृद्धिहुनाले अधुरा कार्यसमेत सम्पादित रहनेछन । मित्रजनहरुको सहयोगमा आम्दानिका श्रोतहरु दरीला बन्नेछन । तात्कालिक धनलाभ हुन सक्नेछ ।